स्वास्थ्य – Page 10 – shubhabihani
मुख तथा स्वासको दुर्गन्ध हटाउने १० अचुक उपाय
स्वास गन्हाउने समस्या धेरैलाई हुन्छ । तर कतिपयले आफ्नो स्वासबाट दुर्गन्ध आएको चाल पाउँदैनन् ।
मुखबाट आउने दुर्गन्धले तपाइँको ब्यक्तित्व नै प्रभावित गर्छ । स्वासमा हुने दुर्गन्धले तपाइँको छेउँमा आउन पनि मानिसहरु हिच्किचाउँछन् ।
किन गन्हाउँछ स्वास?
मुखबाट निस्किने दुर्गन्ध एक ब्यक्टेरियाका कारणले हुने गर्छ । यो ब्यक्टेरियाले उत्पादन गर्ने सल्फर कम्पाउण्डले स्वासमा दुर्गन्ध पैदा गर्छ । यो ब्याक्टेरियाले पैदा गर्ने दुर्गन्धप्रति मानिसहरु सचेत हुँदैनन् । त्यस्तै दाँत फोहोर भएमा वा धुम्र पान गर्नेहरुको पनि स्वासमा दुर्गन्ध आउन सक्छ ।
स्वासको दुर्गन्ध हटाउने १० अचुक उपाय
१- खानामा ताजा र रेशादार तरकारी समावेस गर्नुस् । पानी प्रयाप्त मात्रामा पिउनुस् ।
२- एक कप पानीमा एक चम्चा खाने सोडा मिसाएर कुल्ला गर्दा एसिडिटी लेभल कम हुन्छ र स्वासको दुर्गन्ध कम हुन्छ ।
३- ल्वाङलाई हल्का आगोमा तातो पारेर चुस्नुस् । यसले तपाइँको स्वासमा ताजगी ल्याइदिन्छ ।
४- अलैची वा तुलसीको पात खाँदा पनि तपाइँको स्वासको दुर्गन्ध हट्न सक्छ । यो दीर्घकालीन समाधान भने होइन ।
५- तातो पानीमा नुन मिसाएर कुल्ला गर्नुस् । गार्गल गर्दा पनि राम्रो हुन्छ ।
६- अमला, हर्रो र बर्रोको रुखको फेंदको ब्रोक्रो चपाउँदा पनि स्वासको दुर्गन्ध दुर हुन्छ ।
७- जिरालाई भुटेर खाँदा पनि स्वासको दुर्गन्ध हराउँछ ।
८- पुदिनालाई पिसेर पानीमा घोलेर दिनमा २ -३ पटक कुल्ला गर्दा पनि स्वासको दुर्गन्ध हराउँछ ।
९- विहान र सुत्नु अघि दाँत सफा गर्नुस् ब्रस गर्दा पटक पटक कुल्ला गर्नुस् ।
१०- प्रत्येक दिन एक गिलास पानीमा एक कागती निचोरेर यसले मुख कुल्ला गर्नुस् ।
कति समयसम्म सेक्स गर्ने ? जसले पूर्ण सन्तुष्टि दिनसक्छ
एजेन्सी । अधिकांश मानिसहरुमा जान्ने इच्छा हुन्छ कि सेक्सलाई कति समय दिने अर्थात एकपटकमा कति मिनेटसम्म सेक्स गर्नुपर्छ ? यसको कारण भनेको सेक्सलाई लिएर थुप्रै मानिसमा शंका हुन्छ ।
मानिसहरु सोच्छन् कि धेरै समयसम्म सेक्स गर्दा कतै आपत त आइलाग्ने होइन् । तर, यथार्थमा त्यस्तो छैन् । आउनुस् तपाईलाई बताउछौं कि सेक्समा कति समय व्यतीत गर्नुपर्छ ।
भर्खरै कैयौ महिलाहरुसँग यसबारेमा गरिएको कुराकानीबाट आश्चर्यजनक खुलासा भएको छ । सर्वेक्षणमा महिलाहरुलाई सोधियो कि उनीहरु सेक्समा कति समय विताउँछन् । यो प्रश्नमा अधिकांश महिलाहरुले ५ देखि ९ मिनेटसम्म फोरप्ले विधिमा सेक्स गर्ने गरेको बताए र पुरै सेक्स गर्न १० देखि १४ मिनेट लाग्ने गरेको बताए ।
यता एक रिसर्चले महिलाहरुका लागि सेक्सुअल इन्टीमेसी करिब १०६ मिनेट अर्थात झण्डै डेढ घण्टा समय विताउनु सामान्य कुरा हो । जसमा बढी समय फोरप्ले विधिमा गर्दाखेरी लाग्छ । तर, सबैले १०६ मिनटसम्म सेक्स गर्न सम्भव छैन् ।
यद्यपी विशेषज्ञहरु भन्छन्- जति लामो समयसम्म सेक्स गर्नुहुन्छ त्यति नै राम्रो । यसका लागि आफ्नो पार्टनरको साथ नै सन्तुष्ट पाउने आधार हो ।
२९ जेठ, काठमाडौँ।
यदि तपाईलाई दिसा गर्न गाह्रो हुने, दिसा गर्दा रगत आउने, मासुको डल्ला बाहिर निस्कनेजस्ता समस्या छ भने पाइल्स (अर्ब वा बबासिर) भएको हुन सक्छ ।
यो रोगको समयमै उपचार गरेको खण्डमा निको हुन्छ । तर समयमा नै उपचार नगरिए यसले निकै दुःख दिने चिकित्सक बताउँछन् । आयुर्वेद चिकित्सक डा हरिशरण अर्याल सामान्यतया पाइल्स चार चरणको हुने बताउँछन् । पहिलो चरणमा दिसा गर्दा मासुको डल्ला बाहिर आउँदैन तर रगत बग्ने र दुखाइ भने हुने गर्दछ । यस अवस्थामा रहेको पाइल्सलाई औषधिबाट निको पार्न सकिन्छ ।
दोस्रो चरणमा दिसा गर्दा मासुको डल्ला बाहिर आउँछ र पछि आफैँ भित्र जान्छ । यसका साथै दुख्ने र रगत आउने समस्या हुन्छ । यो अवस्थामा लामो समय औषधि सेवन गरी निको पार्न सकिने उनको भनाइ छ ।
तेस्रो चरणमा दिसा गर्दा मासुको डल्ला बाहिर आउँछ, आफैँ भित्र जाँदैन । यस्तो अवस्थामा औँलाले धकेलेर भित्र पठाउनुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा पुगेको पाइल्सलाई औषधिले निको नहुने भएकाले शल्यक्रियाबाट नै उपचार गर्नुपर्ने डा अर्याल बताउँछन् ।
चौथो चरणमा मासुको डल्ला बाहिर नै बसिरहन्छ । साथै, अत्यधिक दुखाई र रगत बग्ने हुन्छ । समयमै उपचार नगर्दा मासुको डल्ला कुहिन थालेर र सङ्क्रमण सम्पूर्ण शरीरमा फैलिएर मानिसको मृत्युसम्म हुने खतरा रहन्छ ।
उहाँले यो रोग १ देखि २ प्रतिशतसम्म क्यान्सरमा परिणत हुने गरेको बताउँदै शल्यक्रिया गरेका बिरामीमा ३० देखि ४० प्रतिशतमा दोहोरिने बताए। समयमै उपचार गरेमा पाइल्सबाट मुक्त हुन सकिने चिकित्सकको अनुभव छ ।
तर यस्तो समस्या भएका बिरामीले दिसा सजिलै खुलाउने खालका खानेकुरा खाने, दिसा रोकेर नबस्ने, गरम मसला, मरिच, पिरो खानेकुरा नखाने र माछामासु कम खाने, हरियो सागपात अनि फलफूल दैनिकजसो खाने, दिनमा तीनदेखि पाँच लिटरसम्म पानी पिउने गर्दा लाभ मिल्ने डा अर्यालको सुझाव छ । यस्तो समस्या भएमा समयमै चिकित्सक कहाँ गई उपचार गराउने पनि गर्नुपर्छ । रासस
सुत्नुभन्दा पहिला हरेक जोडीले अनिवार्य गर्नुपर्छ यी ६ काम, नत्र पछुताउनुपर्ला!
एजेन्सी । कैयौ पटक यस्तो हुन्छ कि विहेको केही समयसम्म सबै कुरा नर्मल (सामान्य) नै रहन्छ । तर, अचानक केही यस्तो उल्झन आउछ जसले वैवाहिक जिन्दगी नै बर्बाद पारिदिन्छ ।
तपाई यकिन गरिरहनुभएको छैन् तर, यो सत्य हो कि कैयौ पटक सुत्ने बानीका कारण पति पत्नीबीच डिभोर्सको स्थिती पैदा हुन्छ ।
हरेक ठाउम्को आफ्नो केही नियम र शर्तहरु हुन्छ त्यसैगरी बेडरुममा पनि केही कुराहरुको विशेष ख्याल राख्नुपर्छ । कैयौ पटक अन्जानमा भएको गल्ती सम्बन्धमा भारी पर्छ । यस्तोमा यी नियमहरुलाई मानेर तपाई पनि आफ्नो वैवाहिक जीवनको एक नयाँ रंग दिन सक्नुहुन्छ ।
१) यदि तपाई दुबैको सुत्ने समय अलग अलग छ भने सबैभन्दा पहिला यो बानीलाई सुधार गर्नुस् । प्रयास गर्नुस् कि तपाई दुबै जना सँगै सुत्नुस् अर्थात एकै समयमा सुत्नुस् । यस्तो न होस कि दुबैमा कुनै एक सुतोस र दोस्रो काम गरिरहन्छ ।
२) प्रयास गर्नुस् कि सुत्नुभन्दा पहिला तपाईको हातमा मोबाइल नहोस् । बेडरुममा टेलिभिजन राख्नबाट बच्नुस् । सकिन्छ भने एउटा म्यूजिक प्लेयर राख्नुस् ताकि रातमा मधुर संगीतको मजा लिनसक्नुस् । सुत्नुभन्दा अगाडिको समयमा ल्याप्टप, मोबाइल र टेलिभिजन हेर्नुभन्दा तपाईले आफ्नो पार्टनर (पत्नी)सँग कुरा गर्नु राम्रो हुनेछ ।
३) काम गर्ने वाली मेड, अफिसको पोलिटिकस, नातेदारको गलत कुरा गर्नु अथवा कुरा काटेर बस्नुभन्दा यो समयमा तपाई दुबै (जोडी)ले एक–अर्कासँग कुरा गर्नुस् । मायाले भरिएका कुराले तपाईको सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाउने काम गर्नेछ ।
४) एक अर्कामाथि पूरा ध्यान दिनुस् । तपाईको सानो सानो तारिफ पनि तपाईको पार्टनरका लागि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रयास गर्नुस् कि सुत्नुभन्दा पहिला तपाई उनलाई महसुस गराउन सक्नुस् कि उनी तपाईको लागि कति स्पेशल छिन् । यस्तो महिनामा एकचोटी होइन् हरेक दिन गर्नुस् ।
५) अलग अलग तरिकाबाट माया प्रेम दर्शाउनुस् । छोएर, अंगालोमा बाधेर र तारिफ गरेर प्रेमको दायरा अझै फराकिलो पार्नुस् ।
६) गुडनाइट किस दिन नबिर्सिनुस् । यसले साना साना प्रयासको माहोललाई सकारात्मक बनाउनेछ साथै तपाई दुईबीचको सम्बन्धलाई कसैले टुटाउन नसक्ने गरी मजबुत बनाउनेछ ।
(मनोविज्ञान तथा स्त्री डाक्टरको सहयोगमा)
फुलेको पेट सन्चो गर्ने उत्तम ६ उपायहरु एस प्रकार छन्
केही खानेकुरा, बानी तथा कुनै बिमारीको कारण पेट फुल्ने समस्या हुनसक्दछ। पेट डम्म भएको अनुभव हुने गर्छ।
अधिकांस व्यक्तिको पेट फुल्ने कारण एरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम, अल्सर जस्ता समस्याको कारण हुन सक्दछ। कलेजोमा इन्फेक्सन, हेपटाइटिस जस्ता रोगका कारण पनि पेट फुल्न सक्दछ।
यहाँ केही त्यस्ता फलफुलहरु उल्लेख गरिएको छ जसले प्राकृतिक रुपमै पेट फुल्ने समस्याबाट छुटाकार दिलाउन सक्छ।
पेटलाई सफा गरेर अतिरिक्त पानी अनि ग्यांस निकाल्न कागनी पानी सबैभन्दा उत्तम पेयपदार्थ हो।
यसमा भिटामिन ए, पोटाशियम र फाइबर पाइन्छ। यसले पाचन प्रक्रिया ठिक बनाउँछ।
खानेकुरा पचाउन अदुवा जस्तो अर्को हुनसक्दैन। यसमा हुने एन्टी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटिको कारण पेटले राहत पाउँछ।
पोटासियम प्रशस्त पाइने भएकाले नरिवल पानीले शरिरमा सोडियम सन्तुलनमा राख्न मद्धत गर्छ।
यसमा प्रोबायोटिक्स अर्थात शरिरलाई चाहिने ब्याक्टेरिया पाइन्छ। फुलेको पेटको लागि दही निकै राम्रो मानिन्छ।
यसमा पाइने प्रशस्त पोटासियमले शरिमा सोडियम सन्तुलित गरि पेटको फुल्ने प्रक्रियामा पनि कमी ल्याउँदछ।
विहेपछि महिलाहरु किन धेरै हेर्छन ब्लू फिल्म ?
एजेन्सी । पोर्न फिल्म हेर्ने मामिलाबारे गरिएको एक अध्ययनमा महिलाहरु विहेपछि बढी पोर्न फिल्म हेर्ने गरेको पत्ता लागेको छ ।
यद्यपी पुरुषहरुमा यसको ठिक उल्टो कुरा पत्ता लागेको छ । अध्ययन रिपोर्टमा विहेपछि पुरुषहरु पोर्ने फिल्म कम हेर्ने गरेको पाइएको छ ।
बेलायती पत्रिका द इण्डिपेन्डेन्टका अनुसार शोधकर्ताहरुले यो कुरा पत्ता लगाउन विहेभन्दा पहिला र विहेपछि सक्सुअलिटीप्रतिको क्रियाकलाप तथा विचारमा कसरी परिवर्तन आउँछ भनेर सयभन्दा बढी विवाहित महिलाहरुसँग र पुरुषहरुसँग सोधेका थिए । यो सोधमा सहभागी ९ प्रतिशत महिलाहरुले विहेभन्दा पहिला पोर्नग्राफी हेर्न कुरा स्वीकार गरेका छन् जबकी २८ प्रतिशतले विहेपछि पोर्न फिल्म हेर्ने गरेको बताए ।
अर्काेतर्फ पुरुषहरुमा यसको ठ्याक्कै उल्टो व्यवहार देखियो । २३ प्रतिशत पुरुषले विहेभन्दा पहिला पोर्न फिल्म हेरेको र त्यसमा १४ प्रतिशतले मात्रै विहेपछि पोर्न फिल्म हेरेको पाइयो ।
यो अध्ययनको रिपोर्ट सेक्सोलजिज जर्नलमा पनि प्रकाशित भएको छ । अध्ययनमा सहभागी शोधकर्ताहरुले यो रिपोर्ट हेर्दा विहेपछि महिलाहरु बढी पोर्न फिल्म हेर्छन् भने पुरुषहरुमा यो मामिलामा कमी आएको बताए ।
यो प्रश्नमा सोधकर्ताहरुले सेक्सको अत्याधिक चाँहना र पोर्नाेग्राफीबीचको सम्बन्धको पुष्टि भइसकेको भन्दै विहेपछि पुरुषहरुमा समाजमा आफ्नो सामाजिक–आर्थिक हैसियतको स्थापित गर्नमा बढी केन्द्रीत हुने भएकाले उनीहरुको प्राथमिकतामा सेक्सुअल फंतासी नपर्ने र आफ्नै पार्टनरसँग मात्रै सम्बन्ध बनाउन अग्रसर हुने बताए ।
अर्काे तर्फ महिलाहरुलाई विहेपछि सामाजिक कलंक वा अन्य कुनै प्रकारको डर नहुने र घरमा दिनभरी एक्लै तथा खाली हुने भएकाले धेरै पोर्न फिल्म हेर्ने गरेको पाइएको सोधकर्ताहरुले बताए ।
घुर्ने बच्चाहरू पढाईमा कमजोर हुँदै जाने खोजको नतिजा
के तपाईँको बच्चा पढाईमा कमजोर छ? यदि छ भने, सुरुमा ऊ कसरी सुत्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्। किनभने घुर्ने समस्याले बालकहरूको सोँच्न सक्ने क्षमता र केहि कुरा सिक्न सक्ने क्षमतामा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ भन्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले पत्ता लगाएका छन्।
कहिलेकाहिँ घुर्नु बालकहरूको लागि सामान्य भएतापनि, लगातार घुर्ने बानीले उनीहरूमा ‘स्लीप एप्निया’ (Sleep Apnea) नामक समस्या उत्पन्न हुन सक्दछ। जसले गर्दा कुनै कुरामा एकतृत भएर सोँच्न अनि नयाँ कुरा सिक्नमा बालकहरूलाई कठीनाइ हुने खोजको नतिजाबाट देखिएको छ।
स्लीप एप्निया यस्तो समस्या हो, जसको कारण सुत्ने व्यक्तिको स्वास छिनछिनमा बन्द हुने र खुल्ने गर्दछ।
घुर्ने समस्याको सबैभन्दा प्रमुख कारण भनेको घाँटीनेरको रुद्रघण्टी ठूलो हुनु हो, जसको साधारण सर्जरी मार्फत उपचार गर्न सकिन्छ। तर कतिपयको सुत्ने अवस्था नमिलेर पनि घुर्न सुरु गर्दछन्।
उक्त खोजमा, ५ देखि ७ वर्ष सम्मका घुर्ने र नघुर्ने गरी कुल १,३५९ जना विद्यार्थी बालकहरूलाई सहभागी गराइएको थियो र उनीहरूमा देखिएको स्लीप एप्नियाको गम्भीरतालाई हेरेर ४ समूहमा विभाजन गरिएको थियो। त्यसपछि खोजकर्ताहरूले हरेक विद्यार्थीको सुत्ने स्थितिलाई रातैभरी नीरिक्षण गरिरहे। त्यसलगायत उनीहरूको बोल्ने कला, सीप तथा भाषाविकासको पनि परीक्षण गरे।
चारै समूहबाट निस्किएको आँकडालाई दाँजो गरेर हेर्दा, केवल एउटा घुर्ने समस्याले पनि बच्चाहरूको सोँच्न सक्ने क्षमतामा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूले पत्ता लगाए।
“हाम्रो खोजको नतिजाले पूर्णरूपमा समस्याको पहिचान गर्न नसकेपनि, यसले आगामी दिनहरूमा हुने अनुसन्धानलाई मद्दत गर्न सक्दछ। जसले दुनियाँका लाखौँ बुद्धिमानी र प्रतिभाशाली बालकहरूमा देखा पर्ने साझा समस्याको पहिचान गरेर त्यसलाई जरैदेखि उखेल्न मद्दत गर्दछ।” अमेरिकाको ‘युनिभर्सिटी अफ सिकागो’की लेला गोजलले भनिन्।
यस्ता ५ सङ्केत देखियो भने बुझ्नुहोस् कि कफी धेरै भयो
चिया कफी मन पराउनेहरूलाई अफिसमा लगातार काम गर्दा कति कप कफी पिइयो भन्ने कुराको हेक्का हुँदैन। यो कुनै नौलो कुरा भएन। केहि समयअगाडि भएको अनुसन्धानबाट कफीको नियमित सेवनले मुटुको धमनीमा परेको दवावलाई कम गरी मुटुसम्बन्धी समस्यालाई टाढा राख्दछ भन्ने पत्ता लागेको थियो। त्यसैगरी रचनात्मक अनि दिमाग खियाउनुपर्ने कामको लागि कफीले मद्दत पुर्याउने पनि उक्त अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको थियो।
तथापी, कफी भनेको लत लगाउने पेय पदार्थ हो। पिउँदै पिउँदै आफूलाई चाहिने भन्दा बढि पिएको पनि पत्तो हुँदैन। जसले गर्दा टाउको दुख्ने, अनिन्द्रा, तनाव र थकान जस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुन थाल्दछन्। र यस्ता समस्या अन्य कुनै कारणबाट भएको हो भन्ने अधिकांश मानिसहरूले सोँच्ने गर्छन्।
आज हामी तपाईँहरूलाई यसै सन्दर्भमा रहेर, अधिक कफीको सेवनले हाम्रो स्वास्थ्यमा के-कस्ता सङ्केतहरू देखिन थाल्दछन् भन्ने बारेमा छोटो जानकारी दिन गैरहेका छौँ।
कफी धेरै पिउँदा–
१. तपाईँको पेट दुख्न थाल्छ
खराब, बासी तथा सडेगलेको खानाको कारण पनि पेट दुख्ने समस्या आउँदछ। महिलाहरूलाई रजस्वलाचक्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि पेट दुख्न थाल्दछ। तथापी, यदि तपाईँको कफी पिउने बानी छ भने त्यसैको कारण पनि पेट दुखेको हुन सक्दछ। हालै एक यूरोपेली वैज्ञानिकले गरेको अनुसन्धानबाट के पत्ता लागेको छ भन्दा, कफीमा पाइने रसायनिक तत्वले हाम्रो पेटमा एसिडको उत्पादन गराउने तन्तूहरूलाई सक्रिय गराउँदछ र फलतः पेट फुल्ने अनि ग्याँस्ट्रिक हुने जस्ता समस्या पैदा गराउँदछ। त्यसैले यदि तपाईँको पेट दुखाईको कारण अधिक कफीको सेवन हो जस्तो लाग्छ भने १/२ दिन कफी पिउन बन्द गर्नुहोस्।
२. तपाईँको मुटुको धड्कन छिटो हुन थाल्छ
मुटुको धड्कन तेज भएर करङबाटै बाहिर निस्केला जस्तो हुँदा त्यसै-त्यसै डर लाग्न थाल्दछ। यसरी मुटुको धड्कनमा अनियमितता आउनुको पछाडि क्याफीन, निकोटिन तथा मदिराको मूख्य भूमीका हुने उक्त अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ। कहिलेकाहिँ कसै-कसैलाई यसरी मुटुको गति छिटो हुँदा रिँगटा लगाउने साथै बेहोस पनि गराउन सक्दछ। त्यसैले यदि कफि पिउने बित्तीकै मुटुको धड्कन छिटो हुन थालेको महशुस गर्नुभयो भने बुझ्नुहोस् कि कफी धेरै भयो।
३. तपाईँलाई पखाला लाग्छ
कफीको नियमित सेवनले पेटको गडबडीबाट राहत प्रदान गरी दिसा लगाउने प्रक्रियालाई नियमित गराउँदछ। तर यदि दिनमा कफीको मात्रा बढि हुन गएमा कसै-कसैलाई यसले झाडापखाला पनि गराउन सक्दछ। त्यसैले यदि तपाईँको बाथरुम जाने प्रक्रियामा अनियमितता आउन थालेको छ भने केहि दिन कफीबाट टाढै रहनुहोस्।
४. तपाईँलाई निन्द्रा लाग्दैन
कफीमा पाइने क्याफीन हाम्रो शारीरिक सिस्टममा १४ घण्टासम्म बसिरहन्छ, मतलब १४ घण्टासम्म यसको असर स्थिर रहिरहन्छ। जसको कारण हाम्रो निन्द्राको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्न थाल्दछ। त्यसैले राति निन्द्रा नलाग्ने समस्या छ भने दिनको अन्तिम कफी दिउँसोको २ बजेभित्रमा पिउनुहोस्।
५. तपाईँको टाउको दुख्न थाल्दछ
टाउको दुख्दा, माइग्रेनको पीडाले सताउँदा कफीको सेवनले राहत प्रदान गर्दछ। तर यदि तपाईँले दिनमा ५०० मिलिग्राम भन्दा बढि (५ कप भन्दा बढि) कफि पिउन थाल्नुभयो भने त्यसले उल्टो असर गर्न थाल्दछ। जसले टाउको दुखाउने, थकाई लाग्ने जस्ता समस्या उत्पन्न गराउँदछ। यदि यस्तो अवस्था आएमा तपाईँले कफीको सेवनमा कमी गर्दै लैजानुपर्दछ।
६. तपाईँ उत्तेजित हुन थाल्नुहुन्छ
कफीले तपाईँलाई जाँगरिलो राख्न मद्दत गर्दछ। तर कहिलेकाहिँ त्यहि जाँगर उत्तेजनामा परिणत हुन सक्दछ। तपाईँलाई बिनासित्तीमा रमाइलो लाग्न थाल्छ अनि हरेक कुरामा हाँस्न मन लाग्छ। कफीमा हुने क्याफिनले हाम्रो मस्तिष्कको केन्द्रीय स्नायू प्रणालीमा पार्ने प्रभावले नै यस्तो हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्।
प्लाष्टिकको बोतल/गिलासमा पानी पिउनु घातक ! बच्ने कसरी ?
एजेन्सी: प्राय मानिसहरु बोतलमा या त प्लास्टिकको गिलासमा पानी पिउने गर्दछन्। अहिले त झन बोतल र गिलासमा पानी पिउने फेशनकै रुपमा आएको छ। तर अब तपाईले यस्तो गरिरहनु भएको छ भने सावधान हुनुस्। बोतल र गिलासमा पानी पिउनु मानव स्वाथ्यको लागि घातक मानिएको छ।
प्लास्टिकको बोतल वा गिलासलाई कडा चीजले सफा नगर्नुस्।किनकी गिलास वा बोतलमा रहेको पोलीकार्बोनेट चाडैँ फुट्छ।
सबै प्रकारको प्लास्टिकको बोतल वा गिलास एक पटकभन्दा बढी प्रयोग नगर्नुस्। जस्तोकी कोल्ड ड्रिंक्स को बोतल, मिनरल पानीको बोतल, चियाको गिलास आदि। यदि तपाईले पुन: दोस्रो पटक प्रयोग गर्नुभयो भने बोतलमा रहेको कारसिनोजेनिक नामक पदार्थ पानीमा मिल्न जान्छ र स्वाथ्यको लागि हानिकारक हुन्छ।
जानी राखौ : महिलाका लागि सेतोपानी बग्ने समस्या कति खतरनाक ?
काठमाडौँ– अहिले नर्सिङ पढिरहेकी १९ वर्षीया बबितालाई कहिलेकाहीँ योनीबाट सेतोपानी बग्ने गर्छ । उनी मात्र होइन उनका साथीलाई पनि यस्तो समस्या छ तर यसबारे उनले कुनै उपचार गराएकी छैनन् ।
किन उपचार नगराएको भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो – लाज लागेकाले अरुलाई यसबारेमा नबताएकी हुँ । के कारणले यस्तो भएको हो भन्नेबारेमा उनलाई जानकारी पनि छैन ।
महिनावारी हुने समयमा लगातार सेतोपानी बग्ने समस्याले ४१ वर्षीया रीना थापालाई पनि सताएको छ ।
निरन्तर योनीबाट सेतोपानी बग्ने समस्या भएपछि ४४ वर्षीया रीता शर्माले लज्जावती झारलाई पिँधेर खाएको बताइन् ।
धेरै महिलालाई यस्तो समस्या भए पनि उनीहरु चिकित्सककहाँ जान लजाउने भएकाले यिनको उपचार हुन नसकेको बताउँछन् प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. ज्योति अग्रवाल ।
उनले महिलामा देखिने विभिन्न स्वास्थ्य समस्यामध्येको एक ‘योनीबाट सेतोपानी बग्ने’ पनि भएको बताए ।
कतिपयले यसलाई सामान्य रुपमा लिएका हुन्छन् त कतिपयले खतरनाक मानेका हुन्छन् ।
स्त्रीरोग विशेषज्ञ तथा प्रसूति गृहका निर्देशक डा जागेश्वर गौतम सेतोपानी बग्दैमा आत्तिइहाल्नुनपर्ने तर सेतोपानी बग्छ र त्यो गन्हाउँछ भने त्यसबेलाचाहिँ सतर्क भई स्वास्थ्य परीक्षण गराइहाल्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
उनले भने – ‘‘सामान्यतः कुनै पनि महिलाको भित्र फूल बन्ने बेलामा वा फर्मुलेसन हुने बेलामा चिप्लो पानी जान्छ । त्यसैले यो सामान्य प्रक्रिया हो । यदि पोल्दैन, दुख्दैन, गनाउँदैन भने धेरै आत्तिइहाल्नुपर्दैन । तर सेतोपानी जाँदा साह्रै गन्हाउँछ वा प्याड नै लगाएर हिडँनुपर्ने भयो वा चिलाउने पोल्ने भयो भने त्यस्तो बेलामा उपचार गर्नुपर्दछ ।’’
तीस वर्ष पुगेको महिला छन् भने पाठेघरको मुखको जाँच प्याप स्मेर गर्नुपर्छ । अझ सुविधा छ भने ‘लिक्युड बेस साइल्कोजी’ बाट जाँच गर्नु झन् राम्रो हुन्छ । त्यसमा सामान्य नतिजा आयो भने सेतोपानी आएर केही हुँदैन ।
कहिलेकाहीँ पाठेघरको भित्र नै ट्युमर वा क्यान्सर भएरै सेतोपानी बगेको हो कि भन्ने पनि हुनसक्छ । त्यस्तो बेलामा चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ । देखाउँदा सामान्य रहेको नतिजा आए सेतोपानी पछि आफैँ रोकिएर जान्छ ।
तर यस्ता समस्याबाट बच्न सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ । यस्तो समस्या बढ्दै गएमा अन्य खतरा नआओस् भनी चिकित्सककोमा गई जाँच गराउनुपर्दछ । आफैँले घरायसी उपचार पद्धति अपनाउनुको साटो स्त्री रोग विशेषज्ञकोमा गई उपचार गराउनु भरपर्दो हुन्छ ।